Tsy fandriampahalemana :: Mitaky ny hanamafisana ny Dina ireo Zanak’i Sofia • AoRaha
Tsy fandriampahalemana Mitaky ny hanamafisana ny Dina ireo Zanak’i Sofia
Manoloana ny tsy fandriampahalemana izay miha mahazo vahana ankehitriny dia nilaza ireo avara-pianarana sy fikambanana olom-boafidy maro avy any amin’ny Faritra Sofia, afak’omaly, fa: “tokony hohamafisina sy ampiana ny rafitra Dina, izay efa misy any amin’izy ireo. Io no hitanay fa vahaolana ham-pisy fandriampahalemana eto amintsika. Mila jerena tsara ihany koa ny olona izay hitondra ny Faritra”, hoy Randimbilaza Sylvain, talen’ny fampiofanana teknika any Antsohihy.
Isan’ireo toerana mafampana amin’ny tsy fandriampahalemana tato anatin’ny taona vitsy izay ny Faritra Sofia. Isan’ireny ny tranga Antsakabary izay namoizana pôlisy roa sy vehivavy jamba iray ary nahamaizana trano an-jatony maro. Tsy mbola hita ny marina momba io hatramin’izao. Volana vitsy lasa izay dia nodoran’ny andian’olona ny tranon’ny lehiben’ny distrika tany Port-Berger. Nikasa hanafika ny fonja hamoaka olona ihany koa ireo andian’olona tany an-toerana tamin’io.
Noho ireo rehetra ireo dia miantso sy mangataka ny tompon’andraiki-panjakana mba hijery tsara izay olona ho apetraka atao ho governoran’ny Faritra Sofia ireo vondron’olom-boafidy sy manam-pahaizana avy any amin’ny faritra ireo. “Mila olona tsy hanenjika olona tsy mitovy hevitra aminy sy olon-kendry ary olona manam-pahaizana sy mba efa manana traikefa amin’ny fitantanana ny firenena ny Faritra Sofia. Antoka iray hisian’ny fampandrosoana ny Faritra ireo”, hoy Ramanatiana José, mpitondra tenin’ireo fikambanana.
Tsy fandriampahalemana :: Mitaky ny hanamafisana ny Dina ireo Zanak’i Sofia - ewa.mg dit :
[…] Tsy fandriampahalemana :: Mitaky ny hanamafisana ny Dina ireo Zanak’i Sofia est apparu en premier sur […]
Any amin’ny hôpitaly.